Solar Street Lights miaraka Lithium Battery mpamatsy ary mpanamboatra - Shina orinasa - Langxu Lighting.
Home > Products > Solar Street Light > masoandro eny an-dalana fahazavana amin'ny Lithium bateria > Solar Street Lights miaraka Lithium Battery
Araka ny ny tsotra masoaryro fahefana rafizanyra, Integrated masoaryro eny an-dalana fahazavana manana atambatra masoaryro tontonana, LED jiro ary Lizanyhium bateria an- iray fizanyaovana. In ny Maryrizanyra izany fotoana izany, izany dia Ampy fitaovana wizanyh infrared mihetsika sensor. izany dia ihany koa fantatra for low-fahefana fanjifana, ela fanompoana fiainana, avo famirapiratry ny mazava, fikarakarana maimaim-poana, tsotra fitaterana ary tsotra fametrahana.
Satria ny rafitra herin'ny masoandro mora indrindra, ny jiro an'habakabaka nampidirina dia nanambatra ny takelaka solar, ny jiro LED ary ny bateria lithium ho lasa fitaovana iray. Mandritra izany fotoana izany dia misy sensor sensor hoso-dàla izany. Fantatra ihany koa ny fanjifana ambany dia ambany, ny asa fanompoana lava, ny famirapiratana avo, ny fikojakojana, fitaterana mora ary ny fametrahana mora. Izy io dia mety amin'ny làlana izay tsy dia be loatra fiara fitaterana be lalana, làlana, làlana, lalana manokana, vavahady, fidirana, filalaovana, tokotanin'olona, ​​faritra muster any ivelan'ny faritra fitahirizana, jiro isan-karazany ¼ sensor Motion ¼¼šMisy ilay hetsika miorina amin'ny lalana sensor, ny hazavana dia ho simba mandeha ho azy ny herin'ny 30% rehefa tsy misy olona mandalo. Rehefa mandalo ny mpandeha an-tongotra na fiara dia hahita ilay fihetsiketsehana ny jiro ary hihamaivana ny jiro hiasa amin'ny herin'ny 100%. Ny fomba fiasa toy izany dia mitahiry angovo ary maharitra ela ny fotoana fiasana.
Hot Tags: Solar Street Lights miaraka Lithium Battery, Shina, Manufacturers, mpamatsy, Factory, Wholesale, Buy, namboarina, ao amin'ny staoky, Cheap, Pricelist, teny nindramina, Style